Galmudug: garabka Cadaado oo doortay Madaxweyne (Daawo) – Radio Daljir
Galmudug: garabka Cadaado oo doortay Madaxweyne (Daawo)
Oktoobar 20, 2018 7:54 g 0
Cadaado oo xarun u ah Maamulka Khilaafku hareyeey ee Galmudug waxaa lagu soo gabagabeyeey gordhawayd doorashoo ,taas oo lagu dooranayeey madaxweynaha Galmudug xili uu jiro khilaaf u dhaxeeya Madaxda Galmudug.
Xildhibaanada Garabka Cadaado ayaa doortay madaxweynaha Hogaamin doona maamulkaas oo siyaasiyiintu siyaabo kala duwan uga hadleen khilaafka Galmudug.
Doorashadaas dhacday maanta waxaa ku tartamay laba musharax oo kala ahaa Axmed Maxamud Basto iyo Cabdixakin Cali Guure,waxaana ugu dambeyn Xildhibaanadu u doorteen Madaxweynaha Galmudug Axmed Maxamud Basto.
Doorashadaas ayaa waxa ay qeyb ka tahay khilaafka u dhaxeeya Madaxda Sare ee Galmudug oo kala degan Cadaado iyo Dhuusamareeb.
Madaxweynaha Galmudug oo Xildhibaanada Cadaado ku shirsan ay horay u sheegeen inay xilkii ka qaadeen ayaa haatan ku sugan Magalada Garoowe oo uu shir uga qeyb galayo,halka Xildhibaanada Dhuusamareeb ay iyana sheegeen inay xilkii ka qaadeen Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug.
Wali kama uusan hadli doorashaddan Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale gelle Xaaf oo isagu ka tirsan garabka dhuusomareeb,balse saacadaha soo socda ayaa la filayaa in uu ka hadlo doorashaddas Cadaado ka dhacday.
Hadaba mid kamid ah Xildhibaanadi maanta doortay Madaxweynaha ayaa Radio daljir uga warbixiyeey qaabka doorashadu ku dhacday.
Sucuudiga: “Jamaal Khashoggi wuu dhintay ,waxaana Xirnay Saraakishii dishay ” (Daawo)